Messi oo hoggaaminaya SHAX laga sameeyey xiddigaha kulammada ugu badan la ciyaaray Iniesta & Xavi oo ka mid ah – Gool FM
(Barcelona) 12 Maajo 2020. Waxaa la shaaciyey Shax ka kooban 11 ciyaaryahan kuwaasoo ah xiddigaha kulammada ugu badan la ciyaaray ciyaaryahankii khadka dhexe ee Barcelona Andrés Iniesta.
Lionel Messi ayaa hoggaaminaya safkan kulammada ugu badan la dheelay Iniesta, waxaana sidoo kale ka mid ah Xavi Hernández.
Shaxdan xiddigaha kulammada ugu badan la ciyaaray Iniesta waxaa hoggaaminaya Messi oo 488 kulan la dheelay, waxaana sidoo kale ka mid ah Xavi oo 485 kulan la ciyaaray iyo Busquets oo isaguna la dheelay 440 kulan.
Waxaa shaxdan weerarkeeda hoggaaminaya Messi, Pedro iyo David Villa, waxaana khadka dhexe ku wada jira Iniesta, Xavi iyo Busquets, safka daafacana waxa ay kala yihiin Alba, Pique, Puyol iyo Alves, iyadoo Valdes loo doortay goolka.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shaxda oo dhammaystiran iyo ciyaaryahan waliba kulammada uu la ciyaaray Iniesta:-